चोरहरू – मझेरी डट कम
“जो चोर उसको ठुलो स्वर”भन्ने उखान त पक्कै पनि सुनेको हुनु पर्छ । सुन्नु मात्र हो र जिन्दगिमा कयौँ पटक यस उखानको प्रयोग गरेर अर्कोलाई हियाउनु प्रयास पनि गर्नुभयो होला । जो जसले चोररै जिन्दगीको रथ हाकिरहनु भएको छ । यस्ता व्यवसायी चोरहरूलाई तँ चोर होस भनेर दोस लगाउदाँ खासै आपत्ति पर्दैन । चोरलाई चोर त भन्यो नि तर यो पंक्तिका के आरोप लगाउन चाहन्छ भने तपाईहरू सबै जना चोर हुनुहुन्छ । नाथे चोरल के फूर्ती देखाउनु के धाक लगाउनुहुन्छ र !
चोरर पनि निष्कलङ्क हु भनेर सबै सामु सज्जन, भलाद्मी बन्न खोज्ने भद्र व्यक्तिलाई झन चोर औँला ठडयाएर चोरीको आरोप लागाउँदा तपाईको कन्सीरीको रौँ ठडिए होलान । कस्तो झुट्टो फत्तुर लगाएको होला ? जस्तो आफू त्यस्तै अरुलाई पनि ठानेको होला ?
त्यस्लाई भेटन पाए त मेरो स्वाद गजबले चखाई दिन्थे भनेर बत्तीसे बंगारा कटकटाउनु भयो होला । तर के को मतलब ! पंक्तिकारलाई जे जस्तो ठान्नु देख्नु भए पनि कुनै आपत्ती छैन । चोरको आरोप लगाएको कारण भेटघाट हुदाँ मित्रबत व्यवहार गर्नको बदलामा धारे हात लगाएर बाह्रसत्तरी सराप गरेपनि, सत्तोसराप गरेर मुर्मरिए नि खाँचैसित । उल्टै तपाईँलाई हृदय देखिनै मुरीमुरी धन्यवाद टक्र्याउनेछु ।
सरसामान चोरेर जीवन गुजारा गर्ने चोर मात्र चोर ठहरिन्छ र ? तपाईँ साहित्य सिर्जनामा लागेर साहित्यकार बन्नुभएको छ भने के अहिलेसम्म कसैको सिर्जना चोर्नुभएको छैन ? पक्कै पनि चोर्नुभएको छ । सके कसैको अक्षरशः कथाबस्तु, भाषा, शैली, भाव चोरेर आफैले सिर्जना गरेको हुँ भनेर मख्ख पर्नुभएको होला । छिटो लोकप्रियता कमाउन भाव, शैली र कथाबस्तु नबाङ्गिने गरी अलिअलि शव्द परिवर्तन गरेर अर्काकै साहित्य सिर्जना चोरेर आफ्नो नामबाट कतिओटा रचनाहरू छपाउनुभयो ? कतिलाई दिनका दिन हैरान पार्नुभयो ? एकपटक ठन्डा दिमागले सम्झनुस् त । तपाईँ जस्तो चोरलाई चोर नभनेर के भन्ने ? कि साहित्यकार भन्ने ? तन जोगी त के मन जोगी पो जोगी भनेर सच्चा सिर्जनाकार बन्नुका बदल लोकोपत्यार जोगीको बस्त्र धारण गरेर धोका दिने के भन्ने ?
रामनाम बस्त्र धारण गरेर तनभरी भष्म लेपन गरेर भोगी बन्ने छद्मभेषीलाई के भन्ने ? यस्ता चोरहरू पनि थरीथरीका हुन्छन् । कोही साहित्यका शैली चोर्छन्, कोही भाव चोर्छन्, वरिष्ठ संगीतकार भनेर कहलिएका संगीतका महान हस्तीहरूले पनि अर्काको संगीत चोरेर हैरान पारेका छन् । विल्कुल मौलिक रचना सुन्न चाहने संगीत पारखिका चाहनालाई ओझेलमा पारेका छन् संगीत चोरहरूले । चोर्नुको पनि हद हुन्छ । सित्तैमा पाए तीन माना चुक खाने आँखामा खुर्सानी दल्ने नेपालीहरूले चोर्न पाए कति चोर्लान् । सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
चलचित्रको क्षेत्रमा प्रवेश गरेर चोरीको कुरा गर्ने हो भने चोरका कुरा गर्नु र्न लाजमर्दो छ । चलचित्रको कुन विषयमा चोरी भएको छैन ? नेपाली चलचित्रलाई फुलाउनुपर्छ, फलाउनुपर्छ भनेर अहोरात्र लागिपर्नेहरूमा को चाहिँ चोर छैनन् र ? यहाँ चलचित्रको नाम देखि लिएर पटकथा संगीत अभिनय सम्वादमा निस्फिक्रि चोरी हुन्छ । कुनै कुनै चलचित्रमा त सम्पूर्ण कुराहरू चोरी भएको पाइन्छ ।
ठ्याक्कै प्रतिलिपि गर्यो भनेपनि हुन्छ । नाम पनि ठ्याक्कै प्रतिलिपि उतार्छन् । चोरेपनि मर्यादा उल्लङ्घन नगरिकन चोर्नु नि । चलचित्रको नाम पनि ठ्याक्कै अनुवाद गरेर चोर्नुहुन्छ त ? हिन्दी वा अङ्ग्रेजी चलचित्रबाट अनुवाद गरेर नेपाली चलचित्र बन्यो । बिल्कुल नेपाली कथाबस्तुमा आधारित मौलिक सामाजिक चलचित्र हो भनेर झुठो विज्ञापन गरिदियो । दर्शकलाई दिनदहाडै ठग्दै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने नामुद चोरलाई चोर नभनेर के भन्ने ?
सजाय नै दिन निल्ने चोर त झन घातक चोर भएन र न मैले साहित्यक रचनाहरू चोरेको छु । न मैले संगीतकार भएर संगीतको प्रतिलिपि उतारको छु । न मैले गीतकार भएर गीतको नक्कल गरेको छु । अहिलेसम्म कसैको केही पनि चोरको छैन भनेर चोरको आरेपबाट फुत्कने जमर्को गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि पर्खनुहोस । तपाई पनि उम्कन पाउनु हुनेछैन ।
दुनियाँलाई ढाँटे पनि आफूले आफूलाई नढाटीकन भन्नुहोस त अहिलेसम्म केही कसैको दिल चोर्नुभएको छ कि छैन ? पराईको दिल चोरेर खुसी चैन सबै लुटेर अन्योलमा रुमल्याइरहनु भएको छ कि? निद्रा चोरेर मनलाई एकोहोर्याई दिनुभएको छ कि ? युवा भए युवतीको र युवती भए युवाको दिल चोरेर हैरानी र सास्ती दिनु चएको छ कि ?
दिल चोर्नेहरूलाई भयङ्कर खतरानक चोरको रुपमा ठान्दछु । अन्य चोरहरूलाई त सजाय भोगायो जरिमाना तिरायो मुक्ति मिल्दछ तर दिल चोरहरूलाई काँक्रो चोरलाई मुड्कीको सास्ती भने झै भुड्कीले वेस्सरी भकुरेर सजाय दिन पनि मिल्दैन न त कानूनको कठघरामा उभ्याउन मिल्ने ? न त कारागारमा कैद गरेर आर्थिक दण्ड जरिवाना गरेर छुटकारा दिन मिल्ने? थाहै नपाई अन्जानमा नै तड्पाई–तड्पाई, सुस्तरी–सुस्तरी अर्काको दिल भित्र पसेर हृदयमा आसन जमाएर अन्त्यमा दिल नै चोरेर फरार हुने चोरलाई कसरी सजाय भोगाउने ? यस्ता डरलाग्दा चोरहरूबाट वचौभन्दा पनि वच्नै नसकिने हुन्छ ।
दिल चोरको आरोप वर्साउदा पनि पुनः फुत्कने चेष्टा गर्दै हुनुहुन्छ होला । न मसँग लोभलाग्दो सौन्दय छ, नसँग यथेष्ट धन दौलत छ? न म उच्च घरानाको हुँ ? म जस्तो गोज्यांग्रे, कुरुप, जिङरिङ्ग परेको काले ध्वासे, वाम पुड्के, लाल रे कस्का दिल चोरे हुँला र ? अथवा म जस्ती नेप्टी, पोक्ची, भुण्टी, कालीलाई कस्ले पत्याउथ्यो र दिल चोर्न ? बेफ्वाकमा दिल चोरको आरोप लगाएर यस पंत्तिकार जोगिन खोज्नुभएको होला भन्दै पंत्तिकार माथि नै खनिनुहोला । होसियार, तपाईइले बुझिसक्नुभएको हुनुपर्छ । के प्रेमलाई घन सम्पत्तिले छेक्छ ? के जातभातले नाकाबन्दी लगाउँछ ? के सौन्दर्य तगारो लगाउँछ ? यदि प्रेमलाई केहीले पनि छेक थुन गर्न सक्दैन भने आफ्नो रुप देखेर आफैलाई घृणा लाग्नेलाई पनि मोनालिसाभन्दा सुन्दर देख्ने हुन्छन् । जो वामपुड्के छ र आफ्नो जिन्दगी आफैलाई दिक्दारी लाग्नेहरूलाई ह्यान्डसम दिलको राजकुमर भन्दै दिलमा सजाउनेहरू हुन्छन् । अब आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस त तपाईले कोही कसैको दिल चोरेको छ कि छैन ?
झन भन्नै मन लागेको गाँठी कुरो त विद्यार्थीको वारेमा हो । वर्तमान होस वा भुतपूर्व सबै विद्याथीको वारेमा वताउनु चाहन्छु । चिट चोर्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार नै हो भन्ठान्ने विद्यार्थीहरूलाई चोरको आरोप लगाइरहन आवश्यक ठान्दिन् । माता पिता र गुरुलाई देवता समान ठान्नुपर्ने नीतिगत कुरालाई पैताला मुनि राखेर परिक्षामा चोर्न नपाए गुरुहरू माथि नै जेजस्तो कदम उठाउन पनि पछि पर्दैनन् । परीक्षामा चिट चोरेर जिन्दगीमा आफ्नै भविष्यको सत्मार्ग भत्काइरहेको पत्तो नै पाउदैनन् ।
वर्तमान अवस्था सम्ममा तपाईले केही न केही त पक्कै चोरेकै हुनुपर्छ । त्यसैले त निर्भिकताका साथ भन्दैछु हामीहरू चोर हौँ ।